I-Google Analytics isebenza ngokulayisha iskripthi esihlanganisa lonke ulwazi, sigcina ulwazi kwiibhrawuza zebrawuza kwaye siluthumele kwiiseva zikaGoogle ngesicelo somfanekiso. Xa iskripthi silayishwe ngaphezulu kwesihlandlo esinye, ngamanye amaxesha sibhala ngaphezulu ii-cookies, kwaye sithumele izicelo zemifanekiso emininzi kwiseva. Kungenxa yoko le nto izinga lokuhlawula isezantsi kakhulu… ukuba undwendwela iphepha elingaphezulu kwesinye kwisiza, awuyi kubhampa. Ke… ukuba izikripthi zisebenza ngaphezulu kwesinye xa undwendwela iphepha elinye, oko kuthetha ukuba undwendwele amaphepha amaninzi.
Enkosi, ndiza kuyithatha le nto. Ndicinga ukuba esi sesona sizathu sokuba indawo yam ye-ecommerce ingenazo izithuthi ezihamba nengxelo ye-analytics. Isikripthi sikagoogle sahlukile kwikhowudi yokulandela umkhondo ekhoyo kwingxelo yayo yohlalutyo lukaGoogle. enkosi mfondini.
Nov 14, 2013 kwi-6: 21 AM
Sawubona uDouglas, ukuqonda okukhulu. Ndilahle into efanayo okoko ndiqalisile kuvavanyo kuMphathi weThegi kaGoogle kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo: Iphepha eli-4 / iiNdwendwe 🙂 kunye nokubuyela umva okwangoku nge-0.47% 😀
Ukulandela iposti yakho, nantsi isiphumo sam:
Imibhalo ebhaliweyo: Kukho i-1 ga.js (ndincamathisele kuphela ikhowudi ye-Analytics kunye noMphathi weTag kwindawo yam). Andiboni kwiskripthi sesibini (Umphathi weTgi) nasiphi na isikhombisi kwi-ga.js kodwa gtm.js kuphela. Andinayo ikhowudi enkulu njengalezo zi-1 zidityanisiwe kunye (kuqala uhlalutyo, emva koko yi-TM), ke akukho mfuneko yokuba ndisebenzise isicelo, nangona kunjalo ndijongile ne-firebug.
2. Kwiphathi yeTag Console ndenze umsitho omnye (ixesha elifanayo lendalo, ixesha elifanayo lokulahla br). Esi siganeko ngokusisiseko sisebenza njengesiqhagamshelo sokucofa kumphulaphuli kwiiKhonkco eziPhumayo kwaye iyafana naleyo icetyiswe nguJames Cutroni kwibhlog yakhe. Kodwa ndenze uhlengahlengiso oluncinci: Inye yeNtsebenzo engeyiyo yokuNxibelelana isetelwe kwiNyaniso (engafanelanga ukuba ibethwe inqanaba lokubhabha?) Kodwa ke ndongeze i-Label = ireferensi endaweni yokuyishiya ingenanto, kuba bendifuna ukwazi apho kunqakrazo khona suka phi. (Nokuba kunjalo ndiyisusile namhlanje njengoko ingekho luncedo njengoko bendicinga)
3. Ndisenamakhonkco ambalwa aphuma kunye ne-onClick yakudala = "_ gaq.push ()" ebethelelwe kodwa zonke zisetelwe kunqakrazo olungelulo olokwenyani.